XFX Na-ewebata Fanless Radeon RX 460 maka $ 140 | Akụkọ akụrụngwa
XFX mara ọkwa Radeon RX 460 Fanless Graphics
XFX bụ otu n'ime ụdị ndị ahụ na-ebupụta mbipụta nke ya otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ahịa na dị ka Gigabyte na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị na-ahụ maka na-eweta ihe ndị kasị mma ndịna-emeputa ka anyị PC. arụmọrụ niile sitere na ya na egwuregwu ọhụrụ ndị ahụ na-apụta kwa mgbe.
Ugbu a bụ mgbe XFX weputara Radeon RX 460 na-enweghị isi. Ọdịdị nke ụdị eserese ndị a na-achọghị onye ofufe adalatala n'afọ ndị gara aga, mana nke a apụtaghị na nnukwu arụmọrụ ya na-eme ka ndị ọrụ ọzọ nwee ụdị ọzọ. Ekele maka ụlọ ndị ọhụrụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha eserese na obere ike oriri.
Kaadị XFX Radeon RX 460 a bụ ihe atụ nke ike ịrụ ọrụ maka ndị ọrụ na-achọ obere ike ma chọọ ka kọmputa ha nọrọ jụụ. Maraworị na ịnwe eserese nwere ike dị elu chọrọ onye ofufe, na nke a, mgbe ị na-egwu egwuregwu dị elu, ga-eji kaadị ahụ zuru oke, dịka mmadụ nwere ike ikwu.
N'ezie, anyị na-ele kaadị mbụ anya na polaris ije mba fan. XFX RX 46 anaghị achọ njikọta ọzọ maka ya ka ọ rụọ ọrụ, ebe ọ bụ na ewepụtara ike ume niile na oghere PCI-Express n'onwe ya.
Ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị na-ewe mgbe ọ na-eme ya adịghị anya na ngwọta RX 460 ndị ọzọ. You nwere ike ịtụ anya ogo 33 mgbe ọ na-abaghị uru na 62 ogo mgbe eji. N’ụzọ ezi uche dị na ya, arụmọrụ ahụ ga-adabere na ikike ụlọ elu ahụ nwere maka ikuku ịgbasa, yabụ a ga-atụ nke a ka kaadị ahụ rụọ ọrụ nke ọma.
XFX RX 460 ga-akwụ ụgwọ ihe dị ka 999 yuan, nke pụtara 140 dollar. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ike ọzọ, esta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » XFX mara ọkwa Radeon RX 460 Fanless Graphics
Nweta ọnọdụ abalị na ngwa gam akporo 7.0 Nougat
CPU a nwere ike inye ndụ kọmputa na 200.000 cores